मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएकै हो ?
‘किसानलाई पेन्सन चाहिएन, तरकारी बेच्ने ठाउँ देऊ’Ankit
हेमजाका पीताम्वर त्रिपाठी खेतमा काउली गोड्दैछन् । आलु गोडिसकेपछि उनले त्यहीँ काउली रोपेका थिए, अहिले आलु खन्दा काउली अलि ठूला भइसकेका छन् । यसरी ड्याङमा मिलाएर तरकारी लगाउँदा त्रिपाठीको खेतबारी खाली बस्न पाउँदैन ।अहिले आलु खन्ने बेलामा काउली गोडमेल गर्ने बेला भएको छ ।
बहसमा सःशुल्क लिफ्ट सेवा : प्रविधिको प्रयोग रोक्ने कि कानून सुधार्ने ?reeshav
नेपालमा प्रविधि भर्सेस कानुनको बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले लिने सःशुल्क लिफ्ट सेवालाई सरकारले अवैध घोषणा गरेर कारवाही सुरु गरेपछि बहस चर्किएको हो । बैज्ञानिकहरु नयाँनयाँ प्रयोग गर्छन् र प्रविधि जन्माउँछन् । कतिपय अवस्थामा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर पनि आविस्कार भएका छन् । । त्यसैले प्रविधि विज्ञहरु तर्क गर्छन्, ‘पहिले प्रविधि जन्मिन्छ, अनि मात्रै कानून ।’
छाया सरकारको अभ्यासले कांग्रेसलाई दरिलो प्रतिपक्ष बनाउला?reeshav
तिपक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका सशक्त पार्न भन्दै नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।सिंहदरबारमा मङ्गलवार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले छाया सरकारको मन्त्री बन्नका लागि आफ्नो विशेषज्ञता र इच्छा भएका मन्त्रालयहरूको सूचीसहित नाम दर्ता गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सडकमा हामी कति सभ्य ?Ankit
बानेश्वर चोक । नजिकै छ, राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउने र त्यसउपर छलफल गर्ने प्रतिनिधिहरुको थलो संसद भवन । तर, त्यसैको छेउ सडकमा भने सामान्य नीति नियममा ‘नागरिक मजाक’ भेटिन्छ । चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे गाडीहरु हुइँकिरहेका छन् । जेब्रा क्रसिङमा पैदल यात्रुले ट्राफिक बत्ती हेरेकै छ नि भन्नेमा ढुक्क छ चालक । तर, पैदल यात्रुलाई त्यत्रो फुर्सद कहाँ ? उनीहरु जहिल्यै हतारमा छन् ।
रवि लामिछानेलाई चौथो सम्बन्धका लागि शुभकामना !reeshav
आफ्नो निजी जीवनका कुराहरु कुनै दिन सार्वजनिक चर्चाका विषय बन्लान् भन्ने मैले कल्पना नै गरेकी थिइनँ । मैले मिडियामा आउन चाहेकी पनि थिइनँ । म त डिभोर्सपछि चुपचाप अमेरिका फर्किएकी हुँ । तर, रवि लामिछानेजीको स्टाटस र अन्तरवार्ता पढिसकेपछि आफ्नो तर्फबाट केही कुरा प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेकी छु । किनकि, मलाई उहाँका प्रशंसकबाट धेरै गालीगलौचका म्यासेजहरु आएका छन् । धेरैले मलाई नै दोषी देखिरहेका छन् ।
'टोपी दिवस': सामाजिक सञ्जालमा देखाउन वा परम्परा जोगाउन?Ayush
ज्यानुअरी १ मा विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाइन्छ। नेपालमा भने केही वर्षयता खासगरी युवाहरूको सक्रियतामा यो दिनलाई 'टोपी दिवस' का रूपमा मनाउने गरिएको छ। नेपालमा मात्रै नभइ विदेशका समेत रहेका धेरै नेपालीले परम्परागत ढाका र भादगाउँले टोपी लगाएर सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर पोस्ट गर्दै मनाउन थालेका छन्।
कान्छो वाणिज्य बैंकका सीईओः सरकारी जागिर छाडेर ‘प्राइभेट’ तिरRoshan
संसारका हरेका मानिसका आ–आफ्नै चाहाना हुन्छन् । सबैका सपना आ–आफ्नै छन् । तर, सबैका सपना पूरा हुन भने सक्दैनन् । कतिले कोशिस गरेर पनि पूरा गर्न सक्दैनन् त कतिले सपना पूरा हुने अपेक्षा गर्छन्, तर कोशिस गर्दैनन् । पेशाको रोजाइमा पनि मानिसका फरक–फरक ईच्छा छन् । कोही जागिरै खान चाँहदैनन् त कोही जागिरकै लागि मरिहत्ते गर्छन् । कसैलाई सरकारी जागिर मनपर्छ त कसैलाई बिजनेश । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सरकारी जागिरमै बढ्दो आकर्षण छ ।
प्रतिस्थापन ऐन ल्याएर यसरी गर्न सकिन्छ समायोजनAchyut
विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशको समग्र उन्नती एवं प्रगतिका लागि विभिन्न शासकीय स्वरुप, संरचना र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयको चरणमा रहेको भएता पनि राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रको समायोजन अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कोटेश्वरमा जामः कहिले जाला घाम !reeshav
कोटेश्वरबाट पूर्वी क्षेत्रका बासिन्दा काठमाडौं छिर्दा घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालय समयमा प‍र्‍यो भने त २/३ घन्टै जाममा बित्छ । सडक जति नै चौडा भए पनि जाम घटेको छैन, बढेको बढ्यै छ । केही समयअघिसम्म सबैभन्दा बढी जामको सूचीमा कलंकी चोक अग्रस्थानमा थियो । अण्डरपास बनेसँगै कलंकी चोकमा अहिले जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता घटेको छ । तर, कोटेश्वरमा भने तीनतिरको सडक चौडा भइसक्दा पनि जाम झन् बढेको छ ।
कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने वीपीको सांस्कृतिक चिन्तनreeshav
नेपाली कांग्रेसको सहासमितिको बैठकमा देशभरिका कार्यकर्ता जम्मा भएको सुनेर म पनि आफू पढाउने कलेज पद्मकन्याबाट रामशाहपथस्थित एउटा पार्टी प्यालेसमा पुगेकी थिएँ । आजभोलि म पार्टीभित्र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कुनै जिम्मेवारी वा भूमिकामा छैन । तर, साहित्यको विद्यार्थी र वीपी चिन्तनको प्रभावमा परेका कारण मलाई यो दलका कार्यकर्ताले देश बनाउन कस्तो नीति लिइरहेका छन्, जान्न मन लाग्छ ।